Al-Shabaab oo soo gaarey khasaarooyin isdaba-joog ah | KEYDMEDIA ONLINE
29 July 2021 Dhibaatadii ugu weyneyd oo ka taaagan waddoonka Muqdisho
Al-Shabaab oo soo gaarey khasaarooyin isdaba-joog ah
Waxay sheegtay in dhowr maleeshiyo ah la dhaawacay laakiin ay u suurtagashay inay baxsadaan oo aysan jirin wax khasaaro ah oo soo gaadhay ciidanka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ugu yaraan 10 ka tirsan xagjiriinta al-Shabaab ayaa lagu diley hawlgal ka dhacay gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya goor dambe oo jimcihii ah, sida ay masuuliyiintu sheegeen.
Ciidanka Qaranka Soomaaliyeed ayaa sameeyay howlgal ka dhan ah kooxda argagixisada, oo isku aruursanayay duleedka magaaladda Beledweyne si ay weerar ugu soo qaadaan saldhigyada militeri iyo xaruumaha maamulka.
Maadaama Soomaaliya isu diyaarinayso qabashada doorashooyinka Baarlamaanka iyo Madaxweynaha bisha soo socota ee July, militariga DF ayaa xoojiyay howlgallada ka dhanka ah kooxda argagixisada.
Ciidanka Soomaaliya ayaa gobolka Shabeellaha Dhexe ka wada hawlgal ka dhan ah Al-Shabaab oo soconaya muddo ku dhaw hal bil, illaa iyo hadda waxay dileen in ka badan 300 oo argagixiso ah, waxayna xoreeyeen lix tuulo.
Ciidanka dowladda ayaa dhankooda ku waayay howlgallada askar iyo Saraakiil dhowr ah oo uu ku jiro Maxamed C/waaxid oo ahaa taliyihii guutada 6aad ee Gorgor kaasoo ku dhintay dagaal ka dhacay tuulada Jilable oo ku dhaw War-ciise.